I-Acer Swift 5 kunye ne-Swift 3: Iincwadana zamanqaku ezinto ezingasindi | Iindaba zeGajethi
I-Acer iyaqhubeka nokusishiya neendaba zenkcazo yayo kwi-IFA 2019. Inkampani ngoku ihambisa iimodeli ezintsha ngaphakathi kuluhlu lweeSwift ultraportable. Olu luhlu lweemodeli luyaziwa ngeencwadana zalo ezincinci kunye nokukhanya, ezigcina nokusebenza kakuhle. Ithweswe isithsaba njengenye yezona zaziwa kakhulu kwinkampani ukuza kuthi ga ngoku.
Kuluhlu oluhlaziyiweyo inkampani igcina iimpawu eziqhelekileyo ezifanayo. Sifumana uyilo oluhle nolucocekileyo, ukukhanya ubunzima, kodwa ngobomi bebhetri obugqwesileyo. Ke baqinisekile ukuba yimpumelelo entsha kwi-Acer, ukusukela kolu luhlu Usishiye ngeemodeli ezintle.
Ngeli thuba Basishiya neelaptops ezimbini ngaphakathi kwoluhlu, njengoko sele iqinisekisiwe. Ifemi ivelise iSwift 5 kunye neSwift 3 kulo msitho e-IFA 2019. Zombini zineenkcukacha ezahlukeneyo, ke siza kuthetha ngalo ngamnye kubo kule meko.
1 I-Acer Swift 5: ilaptop elula ye-14-intshi
2 I-Acer Swift 3: Inamandla kwaye inesitayile
I-Acer Swift 5: ilaptop elula ye-14-intshi
Imodeli yokuqala kolu luhlu yi-Acer Swift 5. Le laptop iyaziwa njengeyona ilula kwiklasi yayo ukusukela oko yaqalayo, into egcinwayo kwakhona, kuba esi sizukulwana sitsha sinobunzima nje nge-990 gram. Ngelixa sigcina ubukhulu obucekeceke kakhulu, obenza ukuba kube kufanelekile ukuthatha nathi kuyo yonke indawo. Imodeli elungileyo kule meko yabasebenzisi.
Le laptop inayo i-intshi ye-14 ye-HD epheleleyo ye-IPSiii isikrini sokuchukumisa. Ngaphakathi iza nesigaba seshumi se-Intel Core i7-1065G7 processor kwaye inokhetho lokusebenzisa imifanekiso ezimeleyo yeNVIDIA GeForce MX2501. Ukongeza, inenkxaso yokufikelela kwi-512 GB ye-PCIe Gen 3 × 4 SSD yokugcina. Incwadana yokubhala yongeza ne-USB3.1 Type-C edibeneyo, exhasa iThunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 ezimbini-band (802.11ax), kunye neWindows Hello ngomfundi weminwe.
Le Acer Swift 5 lukhetho olufanelekileyo kwabo bahamba kakhulu. Kuba ilula, kodwa isinika ukuzimela okuhle ukuya kuthi ga kwiiyure eziyi-12,5. Ukongeza, ilaptop inokukhetha ukusebenzisa ukubiza ngokukhawuleza, esivumela ukuba malunga nemizuzu engama-30 yentlawulo sifumane ibhetri eyaneleyo yokusebenza iiyure eziyi-4,5. Yenza ukuba ilungele abo bahamba kakhulu.
AI-cer Swift 3: Inamandla kwaye inesitayile
Imodeli yesibini kolu luhlu yi-Acer Swift 3, emele ukuba yimodeli entle kwaye elula. Inefayile ye- I-3 intshi ye-HD epheleleyo ye-IPS14 isiboniso. Enye imodeli engasindi, inobunzima kwi-1.19kg kunye ne-15,95mm ubukhulu kuphela. Ke enye imodeli efanelekileyo yokuhamba nathi ngawo onke amaxesha okuhamba kwaye sikwazi ukusebenza naphi na.
Le laptop isebenzisa iprosesa ye-Intel Core i7-1065G7 Uhlobo lwe-250th kunye neempawu ze-Intel Iris Plus kunye nokukhetha i-NVIDIA GeForce MX512 ezimeleyo ye-GPU. Kwaye kubandakanya ukuya kuthi ga kwi-3GB ye-PCIe Gen 4 × 16 SSD yokugcina, i-4GB ye-LPDDR3X RAM, iThunderbolt 6, kunye ne-band-band Intel Wi-Fi 12,5. Ukuzimela yenye inkalo ebonakalayo kuyo, eya kuthi isinike ukuya kuthi ga kwiiyure eziyi-4 zokuzimela. Inokutshaja ngokukhawuleza, okuvumela iiyure ezi-30 zokuzimela kunye nemizuzu engama-XNUMX yokutshaja.
Le laptop iboniswa njengendlela efanelekileyo yokusebenza, kodwa ikwalolonwabo. Isinika imibala ecacileyo kodwa ebonakalayo ngalo lonke ixesha. Oku kunokwenzeka ngokubulela ekusebenziseni iitekhnoloji ezimbini eziphambili kuyo, eziyi-Acer Colour Intelligence kunye netekhnoloji ye-Acer ExaColor yemifanekiso ebukhali kunye nephuculweyo. Enkosi kubo ufumana owona msebenzisi ubalaseleyo.
I-Acer iqinisekisile kule ntetho kwi-IFA 2019 ukuba olu luhlu luya kuthengiswa ngoSeptemba walo nyaka. I-Swift 5 iza kuphehlelelwa ngexabiso lama-euro angama-999 ezivenkileni, ngelixa iSwift 3 iya kutshiphu kancinane, inexabiso nge-599 euro. Ukuba unomdla kolu luhlu, ngeentsuku ezimbalwa anokuthengwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-Acer ihlaziya uluhlu lwayo lweencwadana zeencwadana ze-ultrathin Swift